Waa yaabee Aaway Damiirkii Dadka Soomaaliyeed? Dadku miyuusan Yax-Yaxayn?!…. Ma Nicholas Kay ayaa sidow doono inaga yeelaya. | Voice Of Somalia
Muddo 55,sano ah Gobanimmadeenii ka dib Qaranimadeenii is weydiin baa ka taagan!.…muddo 25,sano ah Burburkii innagu dhacay ka dib wali waa Qaxaynaa,Qaxooti baan nahay !…maxaa dhagar laynoo maleegay!… Ma Golaha ammaankaa?!…Ma Nicholas Kay baa?!….Ma badda Mediterranean-kaa!!…Ma xil-kasnimo yarida Xasan Shiikh baa?! Ma dalalka deriskaa?!….Ma koonfur Afrikaa?!!…Ma xabsiyada Liibiyaa?! .. Ma UNDP-daa?…Ma IGAD baa?…Ma AMISOM baa?… Ma NGO, baa?… Maxaa Jinniyo dalkeenii sharafta badnaa dhex meeraysanaya , Jinni Cad iyo mid Madowba!… Wali ma innagaaba is ogaanay?!……..
Markaad arimahaas oo dhan u fiirsato Waxaa arrin la yaab leh ah, dalku wuxuu leeyahay oday dhaqmeedyo, mujtamaca weyn ee Soomaaliyeedna ay aad uga haybaystaan, warkooda u dhego nugulyihiin, maxaa iyagii ku dhacay? Intuu dalka burbursanaa maxaa loo waayay mid keliya oo si madax banaan gogol ugu fidiya oo deegaankiisa ku marti qaada odayaasha kale ee dhaqanka, oo qabta wada hadal ummadda lagu heshiisanayo?!….arrintaas waa qaan ku maqan odayaasha dhaqanka?…waa laga diidi lahaa!.. oo yaa isku dayay?……
Sow ceeb iyo wax laga yaq yaqsoodo ma aha dadka Soomaaliyeed in iyagoo sii kala jeeda maalin kasta uu u yeerto Nicholas Kay oo inta meel isugu keeno iyagoo aan isa salaamayn midba gooni uga saxiixdo wuxuu doono, waa yaabee aaway damiirkii? Dadku miyuusan yax-yaxayn?!…. inta badan kuwa madaxda ka ah maamul goboleedyada somalida iyo Mr Nicholas Kay xataa isma af yaqaanaan? Hadana wuxuu dhaho way fahmayaan! Iyaga iyo Kay gabdho ma kala qabaan, hadana wax walba way uga xishoonayaan! Iyaga iyo Nicholas Kay dhaqan iyo dhalasho midna ma wadaagaan, hadana wax kasta iyagoo dhibsanaya xataa waxay doonayaan inay waji uga samaystaan!!…. waliba kaaga daranee waxay u yaqaanaan GAAL! Markay ka soo tagaan “Gaalkii wuxuu yiri…Gaalkii baa tegay!!… Gaalkii baa soo socda!…” hadana?!.. .. waxaa hubaal ah in haddii odey dhaqmeedyada Soomaaliyeed ay awood u yeelan lahaayeen, inay wada hadlaan in wax badan ay ummadda ka badbaadin lahaayeen….
Sinji –Dhaan baa innagu wada dhacay Runtii!….SYL waqtigeedii kifaaxii ku waajibay way gudatay, Awoowayaasheen Alle ha u naxariisto…Aabbayaasheen Alle ha u naxariisto!…. intii karaankood ahayd wax bay innagu soo simmeen, gobanimo iyo dowladnimo ayeey innagu simmeen!…intii la doono taariikhdooda ha la qariyo, hasa yeeshee inta yar ee aan ka hayno ama raad ha ahaato, ama sheeko ka hartay ha ahaato waxay dhammaan ina tusayaan inay u dhinteen sidii aan annaga aayo wanaagsan uga dhaxli lahayn!…waana ka dhaxalnay, Ummadnimo, dowladnimo, dal iyo magac muuqda… laakiin annaga ..annaga…Annagee?!….. ilmaheenna ama caruurteena dal iyo qaran ay leeyihiin ma innaga dhaxli doonaan?!…ama ugu yaraan ma innaga dhaxli doonaan fikrad iyo aragti badbaadisa ummadnimadooda!…saansaanta muuqataa waddadeedii ma hayno, kaaga daranee hadana taas ma aragno oo kama war hayno!….
Qalinkii: Axmed-yaasiin Maxamed Sooyaan.
DHAGEYSO:-C/raxmaan Baadiyow: “DF Wey Fashilantay Madax Bannaanidii Wadankana Halis Bey Galisay”